Fursad labaad ma jirtaa Ilaah? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waa filimka ficilka caadiga ah: waxaa jira 10 ilbiriqsi kahor inta uusan bamku gaarin oo kumanaan kun la dilay, iyada oo aan la xusin geesiga sharafta leh ee iskudaya inuu difaaco bamamka. Dhididka ayaa ka daadanaya wejiga geesiga iyadoo saraakiisha bilayska ee kacsan iyo jilayaasha kale ay neefsadaan. Xarigtee ayaa u baahan in la gooyo? Midabka cas? Midabka jaalaha ah? Afar ilbiriqsi oo dheeri ah. Midabka cas! Laba ilbiriqsi oo dheeri ah. Maya, midabka jaalaha ah! Garaac Waxaa jira hal fursad oo keliya oo lagu saxayo. Sababo dartood, geesiga ayaa had iyo jeer ka jaray xargaha saxda ah ee filimka, laakiin noloshu maahan filim. Weligaa ma dareentay inaad gooysay xargaha khaldan isla markaana si lama filaan ah wax walba oo umuuqdeen kuwo lumaya? Waxaan aaminsanahay haddii aan eegno nolosha Ciise, inaan ogaan doonno haddii Ilaah siiyo fursado labaad. Ciise ayaa ahaa (oo waa) Ilaah iyo noloshiisa iyo dabeecadihiisu si cad ayay u muujinayaan astaamaha Ilaaha Aabbaha ah. Markuu xertiisii ​​Butros u yimid Ciise oo Sayidkii weyddiiyey, immisa jeer baan cafin karaa walaalkay oo igu dembaabay? Miyuu ku filan yahay toddoba jeer? Ciise ayaa ku yidhi, Kugu odhan maayo, Ilaa toddoba goor, laakiin, toddobaatan goor oo toddoba ah (Matayos 18, 21-22).
Si loo fahmo muhiimadda wadahadalkan, qofku waa inuu fahmaa dhaqanka wakhtigaas inyar. Waqtigaas, barayaasha diinta ayaa sheegay in la cafiyo qof sedex jeer sameeyay shar. Taas ka dib uma baahnid inaad. Butros wuxuu mooday inuu yahay qof aad u cadaalad ah iyo in Ciise ku farxay jawaabta uu u leeyahay cafiska qofka toddobo jeer. Laakiin Ciise kuma qancin taas, laakiin wuxuu ka dhigay Butros inuu fahmo inuusan fahmin fikradda cafiska. Cafis ma aha marka la xisaabtamo, maxaa yeelay markaa adigu cafi dad kale oo dhan ma cafiyi kartid. Markuu Ciise yiri inaad cafiyo toddobaatan jeer toddobo, ma uusan jeedin 490 jeer, laakiin waa inaad cafiyaan xad-dhaaf. Taasi waa dabeecada dhabta ah iyo qalbiga dhabta ah ee Ciise iyo sidoo kale Ilaah, maxaa yeelay Ciise, Ilaaha Aabbaha ah iyo Ruuxa Quduuska ah ayaa mid ah. Kaliya maahan ahaanshaha, laakiin sidoo kale dabeecadda - taasi waa qayb ka mid ah Saddex-geeska Eebbe.
Fursadaha ma ka maqnayd?
Waxaan la kulmay dad runtii aamminsan inay iyagu dembaabeen marar badan sidaa darteedna Eebbe dib dambe uma cafiyi karo. Waxay dareemayaan inay lumiyeen fursadihii ay la lahaayeen Ilaah oo aan mar dambe la badbaadin karin. Mar labaad, noloshii iyo falimihi Ciise waxay ku hadlayaan si mug leh: Butros, oo ah saaxiibkii Ciise aad ugu kalsoonaa, ayaa si cad u diidey saddex jeer (Matayos 26,34:56, 69, 75) oo weliba Ciise wuu u yimid oo cafiyey oo cafiyey. Waxaan aaminsanahay in khibradani ay ahayd mid khibrad muhiim u ah qaybo badan oo nolosha Peter ah. Wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu daacadnimada badan ee raacsan ciise iyo hoggaamiyaha kiniisadiisa. Tusaalaha kale ee cajiibka ah ee dembidhaafka runta ah ee Eebbe waa in, in kasta oo uu iskutallaabta dusheeda ugu dhintay xanuun daran, haddana Ciise wuxuu si buuxda u cafiyey kuwii mas'uulka ka ahaa dhimashadiisa, xitaa iyagoo weli ku qoslaya. Ka fikir daqiiqad. Waa wax cajiib ah, jacayl dhab ah oo rabaani ah iyo cafis uu Ilaahay oo keliya siin karo, taas oo ka soo horjeedda fahamka guud ee rumaystayaasha iyo kuwa aan rumaysadka lahayn, Eebbe adiga kaa dambeeya. Maahan sheyga weyn ee aan la qaadan karin ee jannada ku jira oo keliya sugaya inuu ku qariyo haddii aad qalad samayso. Tani maahan Ilaah, laakiin waxaan nahay bini-aadam. Taasi waa qayb ka mid ah dabeecaddeenna mana ahan isaga. Annaga ayaa innaguna ilaalinayna caddaalad darradii nagu dhacday oo aan ahayn Ilaah. Annaga ayaa joojinnaa cafinta iyo joojinta cilaaqaadka, mana ahan Allah.
Waxaan ka heli karnaa tusaalooyin fara badan oo ku dhex yaal Kitaabka Quduuska ah ee Ilaah ku muujiyey jacaylkiisa uu inoo qabo iyo rabitaankiisa uu inagu qabo. Immisa jeer ayuu noo ballanqaadaa: Ma doonayo inaan kaa tago oo ma doonayo inaan ku tago (Cibraaniyada 13: 5). Rabitaanka Ilaahay noogu qabo waa inaanan lumin, laakiin in dadka oo dhami ay badbaadeen. Waxa ugu yaabka badan ee runtii ah waa in Ilaah iyo Ciise aysan ku dhawaaqin ereyadan wanaagsan, laakiin ay sidoo kale ku noolaayeen wax walba oo ay ku yiraahdeen nolosha Ciise. Ilaahay hadda fursad labaad ma siiyaa?
Jawaabtu waa maya - Ilaah kaliya ma siinayo fursad labaad, laakiin waa la inaga cafiyey si isdaba joog ah. Ilaah si joogto ah ugala hadal dembiyadaada, marinhabaabinta iyo dhaawacyada. Indhaha ku hay isaga oo ha ku meerin halka aad u maleynaysid inaad ka maqantahay. Eebana ma taliyo talaabooyinkooda. Wuxuu sii wadi doonaa inuu na jeclaado, na cafiyo, dhinacna naga dhigo wax kasta oo yimaada. Helitaanka qof na siiya fursad labaad - xitaa maalin kasta - ma fududa, laakiin Ciise wuxuu na siiyaa labadoodaba.
waxaa qoray Johannes Maree